Visa mpizahatany indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana, ampiharo amin'ny Internet, Visa fizahan-tany 5 taona
Ny olom-pirenena amerikana dia afaka mangataka Visa Indian Tourist Online
Ny olom-pirenena amerikana dia afaka mahazo visa e-Tourista 5 taona
Sehatra tsara indrindra hangataka visa fizahan-tany Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fepetra takiana amin'ny visa fizahan-tany Indiana, tsidiho ny tranokala izao. The India Tourist eVisa dia antontan-taratasy ofisialy mamela ny fidirana sy fitsangatsanganana ao India ary mifamatotra elektronika amin'ny pasipaoronao.
Ny manampahefana Indiana misahana ny fifindra-monina dia nanova ny politikam-pizahantany Visa tamin'ny volana septambra 2019. Mba hahatanteraka ny fahitan'ny praiminisitra Narendra Modi ny fampitomboana avo roa heny ny isan'ny mpizahatany tonga any India avy any Etazonia, dia nanambara ny minisitry ny fizahantany Prahlad Singh Patel fa hisy ny fiovana amin'ny Visa an-tserasera Indiana .
Manomboka amin'ny volana septambra 2019, dia misy Visa 5 mpizahatany indiana maharitra (India e-Visa) maharitra ho an'ny mpizahatany any amin'ny pasipaoro amerikanina maniry mafy hitsidika an'i India imbetsaka ao anatin'ny 5 taona.
Ny lahatsoratra dia mirakitra ny fahamendrehana sy ny antontan-taratasy ilaina mandritra ny 5 taona fizahan-tany Visa sy ireo toerana manintona ho an'ny Amerikanina.
Ny Visa Indian Tourist ho an'ny olom-pirenena amerikana dia misy amin'ireto sokajy manaraka ireto:
Fampandrenesana Visa mijanona mandritra ny 5 taona ho an'ny olom-pirenena amerikana
Fa Ireo manana pasipaoro amerikana dia mijanona maharitra mandritra ny fidirana tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 180 andro.
Ny visa e-Tourista 5 taona dia matetika no avoaka ao anatin'ny 96 ora. Na izany aza, tsara ny mampihatra herinandro mialoha ny sidinao.
Mangataha Visa Indian Tourist avy any Etazonia
Inona no hetsika avela amin'ny Visa Indian Tourist Visa ho an'ny olom-pirenena amerikana?
Inona no fepetra takiana amin'ny fangatahana Visa Indian Tourist?
Inona avy ireo toerana mahaliana indrindra ho an'ny olom-pirenena amerikana any India?
Experience Taj Mahal ao Agra- Tsy mila fampidirana i Taj Mahal, tsangambato faran'izay tsara maneho fitiavana sy fifikirana. I Agra dia mirehareha ihany koa amin'ireo tsangambato ara-tantara maro hafa tamin'ny andron'i Mughal sy tanàna iray feno kolontsaina sy lova.
Ladakh na Little Tibet - Ladakh dia manintona lehibe iray noho ny hatsarany sy ny kolontsainy miavaka. Any Jammu sy Kashmir no misy azy, mirehareha amin'ny toetrandro mahafinaritra sy trano efa taloha be izy io Monasiteran'ny bodista.
Sikkim - Sikkim dia 1 amin'ny fanjakana indianina kely sy be mponina indrindra. Eo am-pototry ny Himalayas no misy azy, voahodidin'ny tendrombohitra tsara tarehy izy io ary misy fifangaroan'ny kolontsaina Tibetana sy Bodista.
Kerala - Manolotra torapasika tony i Kerala, Resorin'i Ayurveda ary spa voajanahary. Tsy maintsy tsidihina ho an'ny mpizaha tany amerikana izy io ary tonga lafatra ho an'ny mpivady na fialan-tsasatra. Kerala koa dia manolotra dite sy toeram-pambolena zava-manitra.
Nosy Andaman sy Nicobar - Tora-pasika tsara hipetrahana, fanatanjahantena anaty rano, hazandranomasina mahavariana sy mahafinaritra, safira safira mankany amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina no manintona an'io fisarihana maro loko sy mahatalanjona io.
Fambolena ranomasina maitso any Darjeeling - Darjeeling Himalayan Railway dia lova iray manerantany. Izao tontolo izao malaza amin'ny dite, Happy Valley Tea Estate dia mpizahatany malaza iray hafa. Ny tsiro sy ny fofon'ny Darjeeling Tea dia tsy tokony hadino.
Ranomasina mimanda sy lapa ao Jaipur - Malaza amin'ny tsangambato ara-tantara i Jaipur. Lapa sy rova ​​maro toa ny City Palace, Amer sy Jaigarh Fort, Jantar Mantar Observatory; toerana lova maneran-tany sy Tempolin'i Lakshmi-Narayan
Toerana ara-panahy Rishikesh - Toerana mety indrindra eo am-pototry ny Himalaya hijerena traikefa ara-panahy sy fanasitranana amin'ny endrika ashram lehibe ary koa tempoly. Rishikesh dia malaza amin'ny maro ihany koa Fandaharana yoga. Ho an'ny Amerikanina sy ny mpankafy mozika, “Maharishi Mahesh Yogi Ashram” dia toerana manan-danja indrindra noho ny fitsidihan'ny The Beatles ilay toerana tamin'ny taona 1960.